UPDATE: Fatahaad hor-leh oo uu Wabiga Shabelle ka sameeyay deegaano ka tirsan Hirshabelle – HalQaran.com
UPDATE: Fatahaad hor-leh oo uu Wabiga Shabelle ka sameeyay deegaano ka tirsan Hirshabelle
Jowhar (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa sheegaya, in wabiga Shabelle uu ku fatahay tuulooyin hoosyimaada magaalada.
Deegaannada uu wabiga ku fatahay waxaa ka mid ah, Kalluundi, Timire iyo Maangaay oo dhammaan ku teedsan jiinka Wabaiga Shabeelle.
Fatahaadda Wabiga ayaa saameyn ku yeelatay dhul beereed baaxad weyn oo dalagyada nuucyadooda kala duwan ay ku yaalaan.
Yacquub Buule, wuxuu ka mid yahay Beer tacbatada ku nool Hareeraha Wabiga Shabeelle waxaa uu sheegay in 500 oo hectar oo ku taalla tuulada Kalluundi biyaha ay dhex ceegaagaan, kuwaas oo ku beeran dalagyo kala duwan.
Maamulka gobolka Shabellaha dhexe ayaa sheegay in ay waddaan dadaallo looga hortagaayo in Wabiga uu kusii fataho deegaanno kale oo ka tirsan gobolka.
Tags: deegaanno Hirshabelle, fatahaada wabiga shabelle
Booliska Galmudug oo beeniyay in xubno ka tirsan Al-Shabaab laga sii daayay Xabsiga Dhuusamareeb
DAAWO VIDEO: Wasaaradda Caafimaadka Somaliya oo ka war bixisay Xaaladihii ugu dambeeyay COVID-19 ee Dalka